Thought of the week | Isicelo esingesinye - STBB
Home > Thought Of The Week > Thought of the week | Isicelo esingesinye
Ngokwesiqhelo,izivumelwano ziqulunqwa ngokwendlela yobonelelo nolwamkelo. Oku kubalulekengaphezulu kokuba ubani enokucinga, nanjengokuba lotshintshitshintshi esebenza njengophawu lovunyelwano enye yemfuneko ezibaluleke ngakumbi zesivumelwano esisemthethweni ikwabonakalisa ixesha kunye nendawo esithe saqulunqwa kuyo ngokusemthethweni isivumelwano. Oku kubalulekile,hayi nje ngokwesizathu sobuchwepheshe bezomthetho njengegunya nogunyaziso kodwa nangokuba umzuzu esiqulunqwe ngawo isivumelwano uphawula isiphelo sesigabaseengxoxo yaye iphembelela kwizibophelelo zesivumelwano.
Thina ngokubanzi, ngaphandle kwezivumelwano eziqulunqwe ngezombane, silandela uhlobo lokuba isivumelwano siqulunqwa ngomzuzu, nakwindawo apho lomntu wenze ubonelelo athi aqaphele khona ukuba luthe lwamkeleka,hlobo olo lwaziwa njengo lwazi..Ubonelelo kufuneka, phakathi kwezinye izinto, lwenziwe ngeenjongo zokudala izibophelelo yaye icacise gca imiba engundoqo yesivumelwano kwimigaqo ethile.
Ngokusemthethweni, ulwamkelo lwalo kunyanzelekile ukuba nalo lwenziwe kwangezinjongo zifanayo kwaye luhambelane nemigaqombonelelo. Ukuba ulwamkelo ngokwenjongo aluhambelani okanye alungqamani nobonelelo, luthatha indawo kwaye olona bonelelo lungoloqobo luyaphela. Kubalulekile ukuba sazi uba enyanisweni isicelo esingesinye senziwe, kuba kude kube kanye yamkelwe, akukho mbophelelo iyakuqulunqeka kwaye amaqela angarhoxa ngokukhululekileyo kwisivumelwano. Kumthetho ngokubanzi, umntu othe wenza ubonelelo kunye nesicelo esingesinye angayalela indlela elinothi lwenziwe ngayo ulwamkelo nokuba ingaba sisaziso siyadingeka kusini na. ukuba umboneleli, ngokubhaliweyo okanye ngokucacileyo akasidingi isaziso izenzo ziyakwamkeleka njengolwamkelo olwaneleyo lwesivumelwano. Kuba ke kubalulekisa ukwazi ukuba ingaba ubonelelo lomboneleli lwamkelekile kusini na, kusoloko kungcono uba siphazamele kwicala lengqiniseko kwaye senzele ulwamkelo neenkqubo zezazisi amalungiselelo athile kwisivumelwano.